Slashers & Mowers Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad - Shiinaha Soosaarayaasha & Soosaarayaasha
Faahfaahinta Wax soosaarka Mashiinka cawsku ku habboon yahay dhul daaqsimeedka siman ee meelaha beeraha / daaqsinta ah iyo buuraha iyo buuraha doogga leh. Waxaa badanaa loo isticmaalaa jarista cawska, goosashada calafka xoolaha, maareynta xoola-dhaqatada, jarista dhirta, iwm. Waxaad dooran kartaa mashiin naaftada ah ama matoor shidaal ah awood ahaan Qeexida Waxyaabaha Farsamaynta Qalabka Qaybta Qeexitaanka u dhigma awoodda kw 4.8 Barakaca CC 196 Goynta ballaca mm 60/80/90 / 100 / 120mm xulasho dherer dhumuc mm mm 20-80 ...
Faahfaahinta alaabada Slasher Rotary ayaa ku habboon nadiifinta iyo jarista duurka iyo dhul daaqsimeedka, iyo sidoo kale hagaajinta xoolaha aan sinnayn. Mashiinka ayaa ah mid cilmiyaysan oo naqshadeysan, waari kara adeegga, fududahay in la shaqeeyo oo la ilaaliyo, lagu hagaajin karo dhererka goynta oo leh waxqabad aad u fiican, waxay yihiin mashiinno beereed aad u fiican oo loogu talagalay jarista cawska iyo nadiifinta xoolaha. Qaybta Tilmaamaha Faahfaahinta Farsamada SL2-1.2 SL4-1.5 SL4-1.8 Ballaca mm mm 1200 1500 ...
9gb Jarista Taxanaha
Faahfaahinta Waxsoosaarka 9GB taxanaha goosashada ah waxaa loo isticmaalaa in lagu goosto cawska ku yaal beeraha, keymaha ama dhul ahaan. Waxay ka shaqeysaa buurta, dhulka foorara ama dhul yar. Waxay maamushaa darawalka cagaf-cagafta oo wuxuu leeyahay waxqabad wanaagsan oo shaqeynaya, guntinta oo dhan waxaa lagu qaadi karaa systerm cadaadiska Haydarooliga marka cagaf-cagafku ka gudbo caqabadda. Qaybta Farsamaynta Farsamaynta Qaybta 9GB-1.2 9GB-1.4 9GB-1.6 9GB-1.8 9GB-2.1 Balladhka mm mm 1200 1400 1600 1800 2100 ...